कांग्रेस बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप, कसले कसलाई के के भने ? – Online National Network
कांग्रेस बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप, कसले कसलाई के के भने ?
५ माघ २०७४, शुक्रबार ०३:४५
काठमाडौं, ५ माघ – राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘निर्वाचनबारे बोल्नुस्, पराजयको समीक्षा पछि गरौँला’ भन्दै बैठकको सुरुवात गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा २९ केन्द्रीय सदस्यले पक्ष र विपक्षमा धारणा राखे ।
नेता डा। प्रकाशशरण महतले आफूहरूलाई मात्रै सभापतिको निकट भन्दै आलोचना गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘सभापतिको नजिक को हो, को होइन, सभापतिले भनिदिनुप¥यो । सभापतिको नजिक भनेर सधैँ अपजस हामीले मात्रै खेप्नुपर्ने, सभापतिलाई मात्र दोष दिने रु’ उनले भने । कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विघटन गर्ने हो भने पहिले पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
डा। रामशरण महतले उपस्थितिमा मात्र हस्ताक्षर गर्ने गरे पनि निर्णयमा सहभागी नगराइएको प्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘हाजिर मात्रै गराउने, तर निर्णय सुनाएर चित्त नबुझ्नेलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न नदिने शैली उचित भएन,’ उनले भने ।
डा। मीनेन्द्र रिजालले सभापति र वरिष्ठ नेताले विश्राम लिए पनि ठिकै नलिए पनि ठिकै भन्दै सबै मिलेर जाँदा हुने विषय राखे । पहिलेभन्दा कांग्रेसको मत बढेको उनको भनाइ थियो ।
पहिलो दिन २९ केन्द्रीय सदस्यले बोले पनि अझै केही नेताले बोल्न बाँकी छ । नेता प्रकशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, बलबहादुर केसीसहितका नेताले बोल्ने पालो छ । शुक्रबार ११ बजेलाई पुनः बैठक बोलाइएको छ । निर्वाचनमा बेहोरेको हारबारे २४ माघको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि छुट्टै समीक्षा बैठक डाक्ने तयारी सभापति देउवाको छ । – नयाँ पत्रिका दैनिक